Ibaluleke Kangakanani Indlovukazi u-Elizabeth? - Izindaba
Ibaluleke Kangakanani Indlovukazi u-Elizabeth? Okungaphezu Kokucabanga Kwakho
How Much Is Queen Elizabeth Worth
izinjabulo ku-amazon prime
INkosana uHarry noMeghan Markle basemkhankasweni wokuzimela ngokwezezimali kwiNdlovukazi u-Elizabeth. Yize besivele sithathe i- inkambo yokuphahlazeka ngezezimali zikaDuke noDuchess weSussex, sifuna ukwazi: Ibiza malini iNdlovukazi u-Elizabeth?
Kusuka kwizakhiwo kuya ekukhokhweni kwentela, qhubeka ufundele yonke imininingwane yenani lika-Queen Elizabeth.
I-Tim Graham Photo Library / i-Getty Izithombe
1. Ibiza malini iNdlovukazi u-Elizabeth?
INkosi inenani elilinganiselwa ku- $ 530 million, ngokusho kuka Forbes . Cha-ching!
I-Bethany Clarke / Getty Izithombe
2. Ngabe unemali ayiholayo?
Yebo. Eqinisweni, uthembele emifudlaneni eminingi yemali engenayo. Okokuqala, indlovukazi ithola imali engenayo yonyaka ku ICrown Estate (ibiza cishe u- $ 18 million). Uthola nezimali ezivela ku- UDuchy waseLancaster , okuyi-real estate trust. Ku-2018, kuholele ekukhokhelweni kwenkosi okungamaRandi ayizigidi ezingama-27.
Okokugcina, amaphesenti angama-25 emiholo yeNdlovukazi u-Elizabeth avela ku UMbusi Grant , okuyisamba semali sabakhokhi bentela esinikezwa iSilo minyaka yonke. Ngokuvamile noma iyiphi yayo iphelela ephaketheni lendlovukazi, ngoba ifakwa kwezinye izindleko, njengeholo, izindleko zokuhamba nezokulungisa.
UJohn Stillwell / WPA Pool / Getty Izithombe
3. Uyayikhokha intela?
Kuze kube yiminyaka yama-90s, iNdlovukazi u-Elizabeth yayingakhokhi intela kunoma iyiphi imali ayitholayo. Vumela lokho kungene ngaphakathi. Inkosi ayibophezelekile ngokomthetho ukuthola imali, ukuzuza kwemali noma intela yefa, Isomnotho imibiko.
Ngemuva komlilo owenzeka eWindsor Castle ngo-1992, indlovukazi yaqala ukukhokha intela ukunxephezela eminye yemonakalo. (Yindawo yakhe yokuhlala ayithandayo.) Ngokusho kuka I-BBC , uyinkosi yokuqala ukukhokha intela kusukela ngama-30s.
Ngaphandle kokunye ukukhokhiswa kwentela, indlovukazi kubikwa wenza izinkokhelo zokuzithandela kuziphathimandla zentela zase-UK, Imali engenayo ye-HM namasiko .
I-Rota / Anwar Hussein Collection / Getty Izithombe
4. Ngabe unendawo ethize?
Kubalulekile ukuveza ukuthi izigodlo zasebukhosini (njengeBuckingham neKensington) akuzona ezeNdlovukazi u-Elizabeth. Esikhundleni salokho, baphethwe yiCrown Estate, ngakho-ke izizukulwane ezizayo zamakhosi zingangena kulezi zakhiwo.
Indlovukazi, noma kunjalo, inamakhaya amabili ngasese. Eyokuqala yiSandringham Estate, okuyindlu yezwe eyizigidi ezingama- $ 65. Owesibili yiBalmoral Castle, ebiza imali ebikiwe eyi- $ 140 million, ngokusho kuka Inhlanhla .
O, ukuba ngasebukhosini.
OKUSHIWO: Lalela i- ‘Royally Obsessed,’ iPodcast Yabantu Abathanda Umndeni Wasebukhosini
imikhiqizo engcono kakhulu yokulungisa izinwele
azikho izingcaphuno zosuku lwama-valentines
ungakuyeka kanjani ukuwa kwezinwele
ama-movie wothando lwesiNgisi
ama-movie aphezulu we-10 wezothando
umcabango omuhle wesikole